mairie-antananarivo – Hetsika fitakiana hetran-trano sy hetran- tany ataon’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra
Hetsika fitakiana hetran-trano sy hetran- tany ataon’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra
auteur 12 jona 2017 Commentaires fermés
Nanomboka androany 12 jona 2017 ny fidinana isan-tokantrano hanaraha-maso ny fandoavan-ketra amin’ny alalan’ny fisavana ny rosia nandoavan-ketra na” quittance “eto amin’ny boriboritany 6 manerana ny kaominina Antananarivo Renivohitra izay tanterahan’ny sampandrahara misahina ny vola. Hisy koa ny fanentanana ny olona hamita ny adidiny amin’ny alalan’ny fandoavanan-ketra mba ahafahan’ny Tanànan’Antananarivo manao ny asa fampandrosoana toy ny foto-drafitr’asa, fanadiovana, fanamboaran-dalana… Marihana fa tsy maintsy mampiseho “badge” sy “ordre de mission” ireo ekipa na “agent de poursuite sy Regisseur auxiliaire” midina eny an- toerana misava izany.
Mampahafantatra koa ny kaominina Antananarivo Renivohitra fa efa mivoaka ny hetra taona 2017 amin’ny faran’ity volana jona ity. Ny hetran-trano sy tany dia azo takiana manomboka amin’ny fiandohan’ny volana Martsa amin’ny taona hitsahina.
Entanina ihany koa ny rehetra mba hanao filazana mahakasika ny trano sy tany ny volana janoary ka hatramin’ny 15 oktobra 2017, ka etsy amin’ny fivondronana Anosipatrana ao ambadiky ny MBS teo aloha ny toerana fanaovana filazana izany isan-taona na “déclaration annuelle” ho an’ny hetran-trano.
Ny toerana fandoavam-bola kosa dia eny amin’ny boriboritany misy azy ho an’ireo izay efa naharay taratasin-ketra ara-dalàna ary eny amin’ny Lapan’ny Tanàna Anlakely, Porte 82 no fandoavana hetra ho an’ireo trano vao naorina na koa mbola tsy nandoa hetra mihitsy. Marihana fa ny rosia omen’ny mpandray hetra eny amin’ny boriboritany ihany no manan-kery.
Tsara ny manamarika fa tsy misy ny vola raisin’ ireo tompon’andraikitra mandritra ny iraka izay hampanaovina azy fa fanentanana fotsiny ihany ho an’ny olona eny anivon’ny Boriboritany no tanterahany.
AO ANATY » Fotodrafitrasa, Serasera